Lehilahy Nigerien iray tafahitsoka am-bolana maro ao amin’ny seranam-piaramanidina Ethiopiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2019 15:58 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, русский, Română , Swahili, Ελληνικά, English
Eissa Muhamad, avy any Niger, tafahitsoka ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Bole ao Addis Ababa, Ethiopia, nandritra ny roa volana izay. Saripikan'i Eissa Muhamad, nahazoana alalana.
Nilaza i Eissa Muhamad, avy ao Niger, fa efa mihoatra ny roa volana izao izy no tafahitsoka ao amin'ny faritra fiampitana sidina ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Bole ao Addis Ababa, Ethiopia, ary nanomboka tamin'ny 6 Novambra 2018 izany. Voaroaka avy any Israely izay niainany nandritra ny valo taona amin'ny maha-mpifindramonina azy i Muhamad, 24 taona.
Nihaona tamin'i Muhamad aho tamin'ny 12 Desambra 2018, tao amin'ny Seranampiaramanidina Iraisampirenena Bole tamin'ny fotoana nanaovako fiampitana sidina tao Addis Ababa.
Nilaza i Muhamad fa indroa voaroaka avy any Israely tamin'ny taona 2018. Mbola nanankery tsara ny antonta-taratasin'i Muhamad mandeha mankany Israely raha niverina nankany Niger izy tamin'ny voalohany, dia nihodikodina izy ka namandrika sidina iray hiverina any Israely. Rehefa tonga tany Israely izy dia noraofin'ny manampahefana ny antontan-taratasin-diany ary noroahiny nody tany Niger indray izy avy eo. Rehefa niverina nankany Niger izy tamin'ny fanindroany, dia nitaky porofo maha-olompirenena azy ny manampahefana saingy tsy afa-namoaka antonta-taratasy manankery amin'ny maha-Israeliana na Nigerien azy.
Tafajanona valo andro tao amin'ny toeram-pihazonana Nigerien i Muhamad nialoha ny handroahana azy miverina any Israely indray ka mandalo Ethiopia tamin'ny sidina Ethiopian Airlines iray. Rehefa tonga tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Bole tao Ethiopia izy, dia nanao izay tsy idirany ao amin'ny zotra fiampitana mankany Israely ny manampahefana Ethiopiana, tao anaty fiaraha-miasa amin'ny governemanta Israeliana. Nilaza taminy ry zareo fa tsy vonona ny hanaiky azy i Israely, ka nanomboka tamin'io fotoana io dia tafahitsoka tao amin'ny seranam-piaramanidina izy, sady tsy tafaverina ao Niger no tsy tonga any Israely.
Natory tambony seza aho, indraindray matory ao amin'ny moskea, efa roa volana aho izao no tsy nandro satria tsy misy fandroana ny seranam-piaramanidina, ny tavako, ny tanako ary ny tongotro ihany no sasako, dia izay
Niezaka ny hifandray tamin'ny ambasadin'i Niger ao Addis Ababa i Muhamad, saingy noho ny tsy fananany antonta-taratasy manaporofo ny maha-olompirenen'i Niger azy dia tsy afa-manampy azy ny ambasady.
Nisy ny fotoana mbola nanankery ny antonta-taratasin'i Eissa Muhamad mankany Israely, saingy efa tsy manankery intsony izany ary dia tafahitsoka any amin'ny firenena vahiny amin'ny maha-mpifindramonina izy amin'izao fotoana izao. Tsy afaka nohamarinina ireo antonta-taratasy ireo.
Tamin'ny taona 2018, ahitana Afrikana mpifindramonina miisa 34.000 nisedra dia mampidi-doza sy sarotra am-pitadiavana fiainana tsara kokoa i Israely. Saingy milaza i Israely fa maro amin'ireo no mpifindramonina ara-toekarena ka miteraka fihenjanana eo amin'ny toekarena. Ny fisafidianana hijanona dia midika hoe migadra ka midika fa ho sarotra ny hifindrana avy eo.
Ny Praiminisitra Benjamin Netanyahu sy ny antoko elatra ankavanana Likud moa mbola mifantoka amin'ny fikendrena ireo lazaina ho “infiltrators” (fahavalo tafiditra). Namoaka ny fanadihadian'ny Ivontoerana Demaokrasia Israely fa 66 isanjaton'ny Israeliana no manohana ny politikan'ny governemanta amin'ny fandroahana ireo Afrikana mpifindramonina.
Nilaza i Muhamad fa nonina ara-dalàna tany Israely ary niasa tao amin'ny orinasa iray, ary nolazainy tamiko fa noraofin'ny governemanta ny fahafahany monina maharitra tao ary dia noroahiny hivoaka ny firenena izy avy eo.
Tsy nisambotra an'i Muhamad ny manampahefana Ethiopiana ary nanome sakafo azy raha mbola mipetraka ao amin'ny seranam-piaramanidina izy. Ara-teknika dia nanasonia ny dinan'ny taona 1951 mifandraika amin'ny satan'ny mpifindramonina i Ethiopia, nosoniaviny ihany koa ny fifanarahana tamin'ny taona 1967 sy ny fifanarahan'ny OUA miompana amin'ny trangan-javatra manokana amin'ny olan'ny mpifindramonina ao Afrika tamin'ny taona 1969, ary saika ny mpifindramonina rehetra miditra an'i Ethiopia dia mahazo fialokalofana amin'ny fototra prima facie, saingy nilaza tamiko i Muhamad fa tsy mazoto izy ny hitady fialokalofana ao Ethiopia.
Ao amin'ity antsafa an-dahatsary ity i Muhamad nanazava tamiko izany hoe manao ahoana ny tafahitsoka ao amin'ny seranam-piaramanidina ao Addis Ababa tsy manankevitra amin'izay hatao amin'ny hoavy: